Ihe oyiyi ọhụrụ nke HTC Ọchịchọ Anya leaked | Gam akporosis
Ihe onyonyo ohuru nke HTC Desire Eye kwadoro ya n'ihu igwefoto 13 megapixel
Ndi ohuru ohuru abiala ihe oyiyi nke HTC Desire Eye, nke ekwentị ọhụrụ maka selfies site na ndị na-emepụta Taiwan. Ma ọ bụrụ na ị nwere ọhụụ lynx ma ị lee anya n'ihu ngwaọrụ ahụ, ị ​​nwere ike ịgụ n'akụkụ nke "13 MP Wide Angle" oghere, nke ga - akwado igwefoto maka selfies nke HTC Desire Eye.
Amaara mAnyị maara na n'oge na-adịghị anya HTC ga - ejide ya "Ngosipụta abụọ", ebe ị ga-eweta ngwaahịa ọhụrụ gị. A na-atụ anya ka ha were ohere ahụ gosipụta nke ọhụrụ ha HTC anya nso, nke ahụ ga-apụta maka igwefoto ya n'ihu iji wepu onwe ya.
1 Confirmedfọdụ njirimara teknụzụ nke HTC Desire Eye gosipụtara
2 Anya HTC Desire Eye ga-adị na uhie na acha anụnụ anụnụ
Confirmedfọdụ njirimara teknụzụ nke HTC Desire Eye gosipụtara
Ọzọ nkọwa na e leaked bụ banyere ekwe omume na HTC Ọchịchọ Anya na-abịarute na IPX7 asambodo, nke ga-eme ka o mikpuo n’ime omimi dị omimi nke mita 3.2 maka nke kachasị nke 30 nkeji. E nweela asịrị na-ekwu maka ohere a mana eziokwu ndị ọzọ na-egosi na ọ bụ ozi ọma.
The HTC Ọchịchọ Anya na-atụ anya nwere a ngwaike yiri nnọọ ka nke HTC One M8. N'ụzọ dị otu a, anyị ga - ahụ ọnụ nwere ihu FHD 5.2-inch, na mgbakwunye na ihe nhazi Qualcomm Snpadragon 801 na ọsọ elekere nke 2.3 GHz, 2 GB nke RAM, yana igwefoto ya bụ isi na azụ nwere oghere 13 megapixel.
Anya HTC Desire Eye ga-adị na uhie na acha anụnụ anụnụ
Anyị enweghị ike ichefu 32 GB nke nchekwa, 2.400 mAh batrị, Asambodo IPX7 na oke ya nke Android 4.4.4 n'okpuru HTC Sense 6 oyi akwa site na ndị na-emepụta Taoyuan. N'ikpeazụ, a na-atụ anya na HTC Desire Eye ga-adị na agba abụọ: acha ọbara ọbara na-acha anụnụ anụnụ.
Anyị amaghị ụbọchị mwepụta ma ọ bụ ọnụahịa nke HTC Desire Eye ga-enwe mgbe ọ na-akụ ahịa ahụ, agbanyeghị, na-eburu n'uche njirimara ọrụaka ya, o yikarịrị ka ọ bụ 600-700 euro.
HTC na-eme ọfụma. Anyị ahụworị nke ya akụkọ ego kachasị ọhụrụ, ebe ọ na - eme ka nsonaazụ ya dị mma ma e jiri ya tụnyere otu afọ nke afọ gara aga na n'ezie HTC Desire Eye ga - enyere ndị na - emepụta Taiwan aka ịpụ n'olulu. Ọbụlagodi na batrị 2.400 mAh dị ntakịrị ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HTC » Ihe onyonyo ohuru nke HTC Desire Eye kwadoro ya n'ihu igwefoto 13 megapixel
Ọ bụ ezie na ọ bụ asịrị ọ nwere ike ịbụ na batrị ka mma, nke a ga-abụ nnukwu ngwaọrụ.
Esi mgbọrọgwụ LG G2 na gam akporo 4.4.2 ma wụnye ihe gbanwere
Ping, ngwa nghota sitere n’aka ndị okike Nzuzo na-eziga amamọkwa dị omimi